Sida uu sii sameeyo shahaadada,DraperyWaxaa lagu qeybin kartaa biilka korontada drapery iyo xirfadda birta ah Drapery.
Drapery ee birta korontan: waa drapery ee birta korontada. Waxaa u baahnaa oo kaliya in uu u geyso dafka shaqada, taas oo uu uu dhinac, xasil iyo di’aan. Waxbarashadu waa midhaha cusaabiya ee dibada dib ee drapery. Tooska waxaa lagu sameeyaa boobada aluminium, oo aan la wadhiidheyso daahidda iyo xiriirka guriga ee dagaalka, laakiin waxaa sidoo kale ka jeediyaa saameyda dibadda, wuxuuna u kordhisaa aqoonsiga. Rubooyinka uu uu sameeyaa waxbarashada sare ee aluminium ah oo xoog sare ah, kuma sahan. Daryeelka dhinacyada lagu jeedaa, si uu da'daa iyo da'daasha. Dadka waxaa ka sameysaa daboolka sare ee la xiriirta iyo xoog leh, oo uu xaqiijiya nabadgelyada iyo aamin ee la xiriirta la xiriirta.
Drapery ee la xiriirta biilka ee uu uu uu uu uu ku qeybsadaa drapery uu uu uu uu uu uu u jiro. Nidaamka xaaladda jidhka ah ee jidhka ah waxaa lagu qabtaa xarfadda biyaha ee birta. Meesha shahaadada ee uu ka sameeyay guribriga, giraangelii, isgaar, Kaalmooyinka kaalmada iyo ganacsiga kale. Markii uu sameeyo jiiladda birta drapery, ganaareedka uu u xidhiidhayaa si uu u xidhiidha qaarka. Waktan, xoogga ee la sii furaysa guga ee guriga ay u soo xidhiidheyso guriga uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu kaxaystaa. in isku soo xidhiidha, si uu uu u dhaqdhaqaaqa birta drapery. Qaybka ee goobta biyaha ee birta ee guga waa caawimaad, taasoo hore ah waa hal jidka. Dadka sameeyahay si fiican ah u baabsaday ishaha ee gaarka ah, wuxuuna si yar u beddeliyey qaybtii qaarkood. oo u noqdaa dhaqaalaha uu dhacayso ee shubka ah.
Horey:Shaqada ee dharka ee xiriirka ee Sequin.
Ka dambe :Aqood iibsashada daadka biyaha
Drapery-dhalka ee xirfadda- iyo kala qeybinta goobta caafimaadka
Drapery-dhalka ee xirfadda- iyo kala qeybinta goobta caafimaadkaMCC-3:Dadka bibka ah waxaa ku yaal midibo kala duduwan iyo caawimaad.Halqaalaha:·Ciyaad wanaagsan u sameyso.·Caddeyn ee kugu habboon oo ...